အမျိုးအစား: System ကိုအုပ်ချုပ်ရေး
ဒါဟာရေနွေးငွေ့မလှုပ်မရှားမာစတာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ နားထောင်ရန်နှင့်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းပိတ်လိုက်လျှင်, ငါကတ်များရောင်းချနိုင်သလဲ သမ်မာကမျြးနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်၌ Idke မာစတာ kachyaetsa 2010 ခေါက်လျှင် REBZYA ဘာလုပ်ရမှန်းကိုကူညီ ...
အဘယ်ကြောင့် Google Chrome တပ်ဆင်တိုးချဲ့မဟုတ်လော ရုံ mozilu ထား. , vidio https://www.youtube.com/watch?v=LiCHXKMpoIk Chrome ကို shit ဤတွင်))) ကို browser ကိုပြောင်း (ချိန်ညှိမှုများအတွက်) ကို browser cache ကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားပါ။ သူတို့ကမှမလိုချင်ကြဘူး။ သတင်းအချက်အလက် PS အနည်းငယ်, အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီး ...
ယင်းအသုတ်ဖိုင်ဖိုင်ပညတ်တော်ကျေးဇူးပြုပြီးစာရင်းပစ်။ လင်းနို့။ CMD တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်လက်ရှိနိဂုံး statistiki.CLS-သန့်ရှင်းရေး ekranaSHKNTFS-Display ကိုအတူ disc ကို daty.CHKDSK-စစ်ဆေးနှင့်စကင်ကိုအချိန် diskavo zagruzki.ATTRIB မြေပုံကိုပြောင်းလဲ faylov.DATE-Set ၏ (cmd) command ကိုစကားပြန် strok.COPY -Start-Up ...
ငါ operating system အဖြစ်ဟာ android tablet ပေါ်မှာ windows10 ဖုန်းကို install နိုင်သလား? ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ Windows10 ဖုန်းကိုတက်ဘလက်ထုတ်လုပ်သူလိုအပ်သောဒရိုင်ဘာ, ဆိုလိုသည်မှာရေးထားမည်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်သည့်အခါ။ အီးစနစ်တစ် gadget ကချိန်ညှိပါလိမ့်မယ်။ ...
Windows7SP1 တွင် msconfig စနစ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။ Kzhtsya ကိုဒီမှာဆွေးနွေးထားပြီး yuzay - windowsfix ။ သင်မကြာသေးမီကဤနေရာတွင်အကြံပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ disconnect, ကွန်ပျူတာသည် boot တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ပေါ် ...
52 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,228 စက္ကန့်ကျော် Generate ။